Golaha wasiiradda Puntland oo sheegay in laga hortagi doono lacagaha kaashka ah ee lasoo gelinayo gudaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGolaha wasiiradda Puntland oo sheegay in laga hortagi doono lacagaha kaashka ah ee lasoo gelinayo gudaha Puntland
Golaha wasiiradda Puntland oo sheegay in laga hortagi doono lacagaha kaashka ah ee lasoo gelinayo gudaha Puntland
August 24, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Golaha wsaiiradda Puntland. [Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Puntland ayaa sheegay in ay isku raaceen in laga hortago lacagaha kaashka ah ee lasoo gelinayo gudaha Puntland.
Shirkooda asbuuclaha ah oo ka dhacay caasimada Garoowe oo uu shir guddoominayay Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa bayaan laga soo saaray maanta oo Khamiis ah lagu sheegay in goluhu uu isku raacay in la qabto lacagta Puntland soo gelaysa.
“Goluhu wuxuu maanta isku raacay in la qabto lana gubbo dhammaan lacagta gudaha Puntland kasoo gelaysa xuduudaha ee loo soo wato sarifka ee Shillin Soomaaliga ah, waxaana masuuliyada qaadaya ganacsatadii soo rartay.” Ayaa lagu yiri bayaanka.
Golaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo gaar ah loo xilsaaray qabashada, la wareegida iyo ka hor tagga qulqulka lacagta Shillin Soomaaliga.
Asbuucyadii lasoo dhaafay. Puntland waxaa ka jiray dhibbaatooyin dhanka lacagta Soomaaliga ah, taasoo keentay sicir barar balaaran oo ku yimid qiimaha maciishada.
August 18, 2017 Wasiirka cusub ee maaliyada Puntland oo kormeer ku sameeyay ciidamada Puntland ee ku sugan gobolka Sool
June 27, 2017 Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo tagay magaalo xeebeedka Eyl
Tirada dhimashada dadka ku sumoobay biyo ay ka cabeen ceel biyood kuyaala gobolka Bari oo gaartay ilaa 10 qof
Puntland and Somaliland begins withdrawal of forces from Sanaag region
Garowe-(Puntland Mirror) Somalia’s Puntland government has ordered its troops to start withdrawing from Sanaag region and return to their permanent bases after they arrived in Sanaag region last week, according to the officials. Puntland’s military [...]
Wasaaradda Amniga Puntland oo sheegtay in shirar dowladda lid ku ah aan lagu qaban karin gudaha Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda Amniga Puntland ayaa soo saartay amar lagu mamnuucayo in shirar dowladda lid ku ah lagu qaban karin gudaha magaalooyinka Puntland. “Iyadoo ay maalmahan la qabanayey shirar qarsoodi ah oo liddi ku ah [...]